ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ထပ်မံဦးတည်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးများ « MMWeather Information BLOG
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TEMBIN ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ပိုင်းအား စတင်ဝင်ရောက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG »
By mmweather.ygn, on August 21st, 2012
21 Aug 2012 0000Z
Location: 20.2 125.3
Winds: 115 knots (Category 4)
Powerful Typhoon TEMBIN (IGME) has moved NNE slowly during the past 12 hours…now with powerful winds of 215 km/hr. Threat to the Philippine Islands diminishing as it aims for Taiwan.
TEMBIN (IGME) is expected to continue moving slowly northward during the next 12 to 24 hours…and will turn sharply WNW to Westward during the next 36 to 72 hours. On the forecast track, the core of TEMBIN will not directly affect any part of the Philippines as it will remain over the open sea. This typhoon will be approaching the East Coast of Taiwan early Thursday morning…and will make landfall south of Hualien City on Thursday afternoon at approx. 2PM and traverse Taiwan. By early Friday morning, TEMBIN will emerge over the Taiwan Strait in the direction of Southern China.
Maximum Sustained Winds (1-min. avg) have rapidly increased to near 215 km/hr (115 knots) with higher gusts. Still some increase in strength will be expected during the next few days, prior to making landfall…and TEMBIN could becomeaSuper Typhoon by Wednesday afternoon.
Typhoon Force Winds (118 km/hr or more) extend outward up to 55 kilometers (30 nautical miles) from the center…and Tropical Storm Force Winds (62-117 km/hr) extend outward up to 185 kilometers (100 nautical miles) from the center. TEMBIN is an average-sized tropical cyclone withadiameter of 665 kilometers (360 nautical miles) across.
WEDNESDAY MORNING: Nearing Super Typhoon status as it turns WNW to Westward…about 302 km NE of Basco, Batanes [6AM AUG 22: 21.9N 124.5E @ 230kph].
THURSDAY MORNING: Starts to lose strength as it bears down the coast of Eastern Taiwan…about 147 km SE of Hualien City, Taiwan [6AM AUG 23: 22.9N 122.4E @ 215kph].
FRIDAY MORNING: Emerges over the Taiwan Strait after crossing Taiwan…weakens to Category 3…approaching Eastern Guangdong in Southern China…about 99 km NW of Kaohsiung City, Taiwan [6AM AUG 24: 23.3N 119.7E @ 185kph].
ဂူအမ်ကျွန်း အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၄၃၀ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အရှေ့ဘက် မိုင ၁၃၀၀ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း BOLAVEN မှာလည်း အဆင့်-၃ တိုင်းဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
Location: 18.2 140.5
အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်ဘက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများသည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီး တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းအား ထပ်မံဖြတ်ကျော်လျှက် ကုန်းတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့ မိုးများစေသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အား အလွန်ကောင်းသော တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းကြီး TEMBIN နှင့် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ဆီသို့ ဦးတည်ပြီး နောက်မှ လိုက်လာသည့် မုန်တိုင်း BOLAVEN တို့သည်လည်း တရုတ်ပြည် တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းအားဖြတ်ကျော်ကာ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားဦးမည့် အခြေအနေရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်(သောကြာနေ့) နောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း TEMBIN ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီး ရေလွှမ်းမှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် မုန်တိုင်းကြီးများ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းခြေသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် အခြေအနေအသးစိတ်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့် တင်ပြပေးသွားပါမည်။
Uncategorized « တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TEMBIN ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ပိုင်းအား စတင်ဝင်ရောက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG »
1 comment to ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ထပ်မံဦးတည်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးများ
Log in to Reply	တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TEMBIN(15W) သည် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ အားပျော့သွားပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း(သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီ မတိုင်မီ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအား စတင်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ပြီးသောအခါ၊ မူလခန့်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်း တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအားဆက်လက်၍ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုပဲ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ဆက်လက် ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TEMBIN ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ပိုင်းအား စတင်ဝင်ရောက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum